Date My Pet » Ahoana no To Date – Old School Style
Ahoana no To Date – Old School Style
Last nohavaozina: Jan. 23 2021 | 3 min namaky
Value koa no naka ny ankamaroan'ireo zavatra rehetra, avy izany tsotra izao manga misy ranom izay nanampy kalsioma, any amin'ny mpivarotra izay mivarotra vokatra izay natao tamin'ny hanatsarana ny rijan. Na izany aza, misy ireo izay mbola tia an-tsekoly taloha, na dia mahakasika ny fifandraisana?
Na izany aza, fifandraisana Vintage afaka torohevitra mbola mihazona rano-taona vaovao mantras? Moa ho sarobidy toy ny volamena? Andeha hojerentsika ny.
Herim-po foana velona
Mangataka mpivady, izay efa tao amin'ny lava sy ny fifandraisana mahomby mikasika ny zavatra natao azy ireo, ary izy ireo dia tsindrio mety indrindra manonona ny fanajana fa efa foana ny hafa. Vehivavy satria hiady ho fitoviana isan'andro, Tsy midika izany fa izy ireo ihany koa miady herim-po. Ny vehivavy dia mbola tia ny ho ao amin'ny fifandraisana amin'ny lehilahy izay kosa dia misarika ny seza na dia manokatra ny varavarana ho azy ireo. Manao izany ho an'ny vehivavy, ary izany dia maneho fanajana dia zavatra tokony ho nahatratra aorian'ny fanambadiana.
Tsy matory tezitra
Ireo mpivady izay nanana ny tohan-kevitra dia tokony hiezaka ny manatsara izany tony alohan'ny nantsoiny hoe alina. Na izany aza, alohan 'ny azonao ny olana, dia ilaina ny tony aloha, toy ny miezaka mba hahita vahaolana amin'ny malemy fanahy-ny fanjakana dia miharatsy ny toe-draharaha ihany. Tokony ihany koa ny mahatsiaro fa ny tohan-kevitra nitranga tamin'ny olona iray izy ireo, ary tia izay manaja, ka ny zava-dehibe mba handaminana ilay raharaha amim-pisakaizana.
Tandremo ny afo fandoroana
Rehefa ny olona roa vao Mahazo Mampiaraka, miezaka izy ireo mba ho azo antoka fa mahatsiaro manokana fotoana rehetra, handro amin'ny fitiavana sy firaiketam-po . Ny fifandraisana mba haharitra ela, na izany aza, Tokony hiezaka mafy ny mpivady mba hihazonana ny fari-fanoloran-tena mitovy. Manana fifandraisana rehetra soa sy ny ratsy, izay tena ara-dalàna. Na izany aza, dia tokony tsy hamela ny fifandraisana haka indray seza. Tokony hanohy ny fifandraisana ao amin'ny fofonaina ihany tahaka ny teo aloha, satria izany dia zavatra nitandrina azy ireo tamin'izany fotoana izany, ary mety mbola mitandrina azy ireo amin'ny fotoana ho avy.
Mba hanadino andro iray handalo tsy fizarana fiderana manokana. Mety ho fiderana ny fomba mijery ny namanao, fomba manimbolo na tena izy ireo ankasitrahana. Lazao izy ireo fa izy ireo dia sarobidy kokoa noho ny volamena. Ny tena zava-dehibe ho an'ny olona tso-po mba ho amin'ny compliments. Dia ireo zavatra madinika izay mahatonga ny fifandraisana mahasoa. Torohevitra io mety ho Vintage , fa manao fahagagana ho an'ny rehetra ny fifandraisana amin'izao fotoana izao.
Zarao ny veloma oroka
Noho ny tena nizara ny veloma oroka Mety ho toa ka tsotra sy tsy manan-danja ho an'ny mpivady mankafy ny fifandraisana, izany dia midika hoe be dia be, ary namela ambadiky ny hafanana be dia be. Nizara ny veloma oroka no iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hampisehoana ny fomba fitiavana misy afaka ho ny namany. Ankoatra izany, ny fanaovana izany dia manampy mba hanamafisana orina isan'andro ny fifandraisana, toy izany dia taratry ny fitiavana tsapany ho samy hafa.
Raiso sakafo miaraka
Miara-maka sakafo manampy ny hitandrina ny fatorana eo amin'ny mpivady matanjaka sy matotra. Halaviro ny toe-javatra izay mihinana mpiara-miasa iray ao amin'ny efitra fisakafoana, ary misy olona any efitrano ny fipetrahan'ny, mijery fahitalavitra. Tsy salama tsara ho an'ny rehetra ny fitomboan'ny fifandraisana. Miara-maka sakafo manome ny mpivady fahafahana hiresaka. Na izany aza, Mariho fa ny firesahana amin'ny tokony hanao ny sakafo iray mahafinaritra, izay midika hoe foto-kevitra izay mahatonga ny disadisa sy ny fandresen-dahatra tokony hofadina. Ny fototry ny miara-maka sakafo dia haka aina, noho izany dia fidio mahafinaritra mba hiresaka momba ny foto-kevitra ara.
Hihazona tsara bika amin'ny fotoana rehetra
Ny iray dia tokony ho vonona ny handeha kilaometatra iray fanampiny amin'ny alalan'ny fanatsarana ny tarehy, mba hitady ny tsara noho ny mpiara-miasa. Okay, ka mety donning-tena amin'ny ady sy teny hotsaraina molotov ny akanjo tsy mety toa aina mihitsy, fa mitandrina ny tenany madio, tsara tarehy sady tsara no filaza mandidy mitambatra. Tsy ho be loatra mba hijery tsara ny mpiara-miasa iray, indrindra fa raha izany dia hanampy amin'ny fanamafisana orina ny fifandraisana, toy ny mpiara-miasa tsirairay dia ho afaka ny hitazona ny fitiavana samy velona.
Tsy misy fomba tsara kokoa mba hanaporofoana fa tranainy kokoa noho ny volamena amin'ny alalan'ny fifandraisana ireo Manoro hevitra. Gold metaly sarobidy, ary tena sarobidy. Iray ihany fofonaina, Manoro hevitra ireo boaloboka no tena sarobidy amin'ny fifandraisana amin'izao fotoana izao. Ary noho izany, dia zava-dehibe ho an'ny olona amin'izay ny fifandraisana mba mampihatra ireo torohevitra sy mitandrina ny sombin'ny velona mandrakizay.
Dia Online Dating Ho resy?
Ary tamin'ny Hiverina – No mampiaraka an-tserasera ny fomba tokony handeha?
Ny Meaning ny Kiss